Ukubuka ulwandle ngepaneli, iikhilomitha eziyi-2 ukusuka eCollioure - I-Airbnb
Ukubuka ulwandle ngepaneli, iikhilomitha eziyi-2 ukusuka eCollioure
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enendawo yayo yokungena, ekwindawo yokuhlala yabucala ikufuphi embindini wedolophu nezithuthi zikawonke-wonke. Uza kuyivuyela ngenxa yendawo ekuyo, ukujonga, ukuzola, umoya kunye neendawo ezikufutshane. Ilungele abantu abathandanayo, abahamba ngezoshishino kunye neentsapho ezinamagumbi okulala ayi-2. Iindlela zokunyuka intaba ziqala ezantsi kweflethi okanye indlu ekwicomplex.
I-Port Vendres sisibuko sokwenyani, esinokuhamba ngokusisigxina phakathi kolwandle kunye nentaba
Ulwandle , umoya, ilanga kunye nendalo bubomi bethu bemihla ngemihla.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enembonakalo entle yezibuko , etofotofo, esandul 'ukwakhiwa, nenendawo eyi-75 m2. Inethala elinefenitshala, i-loggia egqunywe ngefenitshala yasegadini yonke ejongene nolwandle. Inamagumbi okulala ayi-2 ngalinye linebhedi eyi-140, igumbi elikhulu lokuhlala, igumbi lokuhlambela elineshawa engasetyenziswayo kunye nezindlu zangasese ezahlukileyo, ikhitshi . Ixhotyiswe kakhulu: i-TV, i-DVD player, i-microwave, ifriji enefriji, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba izitya, ibhodi yokuayinela iayini nazo zonke izixhobo zasekhitshini. Amathuba okukonekta nge-Wi-Fi kwinethiwekhi ye-intanethi. Iindlela zokunyuka intaba ziqala ezantsi kweflethi okanye indlu ekwicomplex. Kufuphi namalwandle anesanti, amatsheyina okanye iintlanzi zikufutshane, ziikhilomitha eziyi-3 ukusuka ePaulliles Bay (indawo edwelisiweyo). Ukuba mnandi kunxweme lwethu lwezilwanyana, isixeko sethu sivela kulo mxube ongaqhelekanga wolwandle kunye nentaba. Isikhululo setreyini sikumgama wemizuzu eyi-3 xa uhamba ngeenyawo. Kufuphi kakhulu nezibuko, indawo ethengisa intlanzi, iivenkile, la Rambla, pier, Collioure imizuzu eyi-30 xa uhamba ngeenyawo
Igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, i-terrace kunye ne-balcony ZONKE zijongene nolwandle
Iflethi okanye indlu ekwicomplex icociwe kwaza kwabulawa iintsholongwane (Covid-19) qho uhamba.
Iindawo ezikufutshane ezipholileyo. Akukho mfuneko yokuthatha imoto Yonke into ekufutshane :Iivenkile zokutyela,iikhefi, isikhululo setreyini, ukuthengiswa kweentlanzi ezisandul 'ukuvunwa, i- € 1 ibhasi esebenza kwisebe, i-scuba diving, ukuhamba elwandle, ukunyuka intaba, indawo entle edweliswe kwi-Paulilles, eSpeyin kwimizuzu eyi-30 kude, isikhululo sikaloliwe sikumgama wemizuzu eyi-3...
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port-Vendres